ဘုရားကြီးတိုက်: ဖတ်မိဖတ်ရာ (၂)
Posted by Phayagyitaik, Naya Monastery on Monday, May 14, 2012 at 8:39 AM
အမျိူးသမီးတွေက Facebook ကို ပိုစွဲလမ်းဆိုပဲ။ သုတေသီတွေက အမျိူးသမီးတွေဟာ အမျိူးသားတွေထက် ဖေစ်ဘွတ်ကို ပို၍ အားထားလာဖွယ် ရှိသည်ဆိုပဲ။ နော်ဝေ ဘာဂန်တက္ကသိုလ်က စိတ်ပညာရှင်တွေကပြောတယ် ငယ်ရွယ်သူတွေဟာ ကြီးသူတွေထက် ပို၍ ဖေစ်ဘွတ်ကို စွဲလမ်းလာခဲ့ပြီး အမျိူးသမီးတွေဟာ အမျိူးသားတွေထက် အန္တရာယ်ကျရောက်ခဲ့ပါတယ်တဲ့။
Women more addicted to FB:
Women are more likely to become dependant on Facebook than men, say researchers. Psychologists from the University of Bergen in Norway found during the research that younger people were more likely to become addicted to Facebook than older people and women were at greater risk than men.
WHOက သတိပေးထားပါတယ် နိုင်ငံတကာ ခရီးသွားများအနေနဲ့ အိန္ဒိယမှာ ခြိမ်းခြောက်နေတဲ့ ငှက်ဖျားရောဂါကို သတိထားဖို့နဲ ပြင်ဆင်ပြင်ပြီးမှ ခရီးသွားပါတဲ့။ ကျရောက်နိုင်တဲ့နေရာတွေကတော့ ဟိမချယ် ပရာဒက်ရှ် ဂျမူး နှင့် ဆစ်ကင် ပြည်နယ်တွေ။ ကာလကတ္တား ဘုံဘေ ဘန်ဂါလော နင့် နာဂပူတို့မြို့ကြီးတွေမှလွဲ၍ ကျန်သောနေရာတွေမှာ ငှက်ဖျားရင်ဆိုင်ရပါမယ်။ ခြင်အကိုက်မခံရအောင် သတိနှင့် ခရီးသွားပါမိတ်ဆွေ။
သင့်အတွက် အပျင်းပြေ မှတ်စရာ
ပျမ်းမျှလူအများစုဟာ အခြားညတွေထက် သောကြာနေ့ ညမှာ ကောင်းကောင်း အိပ်ရပါတယ်။ လူ ၂၀၀၀ ထောင်ကို လေ့လာဆန်းစစ်ချက်အရ သောကြာနေ့ဟာ တပါတ်အချိန်ပြည့် အလုပ်ပြီးနောက် လူတွေက စိတ်ဖြေလျောထားသော ပထမ အချိန်ဖြစ်ပြီး သင့်တင့်လျောက်ပတ်သော အနားယူမှုညကို ရစေသောည
နောက်နေ့မနက်စောစော မထရခြင်းဟာလည်း အဓိပအချက်ဖြစ်ပါတယ်။ ဗြိတိန်အများစုဟာ သောကြာနေ့ညမှာ ၉နာရီ အထိအိမ်ကြပြီး အိမ်ဖို့လည်း ၉ မိနှစ်ပဲအချိန်ယူရပါတယ်တဲ့။
သောကြာနေ့ညမှာ လူတွေကို ပုပန်စေတဲ့အရာကတော့ သူတို့ရဲ့ အားလပ်ချိန်ကို ဘယ်လိုသုံးမလဲဆိုတာပါပဲ။
တနင်္ဂနွေညဟာဖြင့် လူအများစုတွက်တော့ အဆိုးဆုံးသော ညပါပဲတဲ့။
The Times of India, 12/3.5.2012
ပဌမ ဘုရားကြီးတိုက် ဆရာတော်